UXiaomi uyeka ukuxhasa iifowuni ezisixhenxe kuluhlu lweRedmi | Zonke iinkonzo ze-intanethi
UXiaomi ubhengeza ukuphela kwenkxaso kwiifowuni zayo ezininzi
Oko kwaqala unyaka, Uluhlu lweRedmi lube luphawu olwahlukileyo kwiXiaomi. Uphawu oluqale uhambo lwalo kwimarike ngonyawo lwasekunene, ubukele ukuthengisa okukhulu kweRedmi Qaphela 7. Olu tshintsho lweempawu luneempembelelo ezininzi, kulwaziso, ukuhanjiswa okanye inkxaso. Into esishiya notshintsho lokuqala kule nkalo. Ukusukela ukuphela kwenkxaso yeefowuni ezahlukeneyo kubhengeziwe.
UXiaomi ukuqinisekisile oko yeka ukuxhasa inani lee-smartphones. Iimodeli ezisixhenxe zizonke, ezinento efanayo. Kuba zonke zikuluhlu lweRedmi. Ngale ndlela, akukho nanye kwezi fowuni eya kuba nakho ukufikelela kuhlaziyo.
Nangona kubonakala ngathi UXiaomi uya kuqhubeka nokukhupha ii-patches zokhuseleko kwezixhobo. Ngokuqinisekileyo le yinto ebalulekileyo, ethi ngakumbi nangakumbi iimveliso kwi-Android zithathwa ngokungathí sina. Ke abanini bayo nayiphi na kwezi fowuni zisixhenxe banoxolo lwengqondo lokuba baya kugcinwa bekhuselekile.
Uluhlu lweefowuni luqinisekisiwe yinkampani uqobo. Iimodeli ezichaphazelekayo, ezishiywe ngaphandle kwenkxaso zezi: I-Redmi 3S 3S Prime, Redmi Pro, Redmi 4 Prime, Redmi 4A, Redmi 4 Global, Redmi Qaphela 4 (inguqulelo neMediaTek) kunye neRedmi Qaphela 3 (inguqulelo neMediaTek).
Zonke ii-smartphones ezikolu luhlu uXiaomi aqinisekisile zineminyaka emibini okanye nangaphezulu ubudala. Ke ayisiyonto eyothusayo. Ukusukela ngaphandle kweemodeli zokugqibela, Kuqhelekile ukuba iimveliso ziyeke ukuxhasa emva kweminyaka emibini. Ke yayisele iyinto abanini bayo abanokuyilungisa kule meko.
Okwangoku kubonakala ngathi kuphela kwee-smartphones ngaphakathi kwibala le-Redmi elishiywe ngaphandle kwenkxaso. Ubuncinci oku kuye kwathethwa kuXiaomi. Nangona ngekhe kumangalise ukuba iifowuni ezininzi zibhengeziwe okwethutyana. Ke ngoko, abasebenzisi abanayo nayiphi na kwezi modeli zisixhenxe, baya kuba nokufikelela kuphela kwiindawo ezikhuselekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » UXiaomi ubhengeza ukuphela kwenkxaso kwiifowuni zayo ezininzi
Izicelo ze-Android zokulawula kunye nemirhumo yakho
Ukucoca okokuqala iGoogle Pixel 3a kunye ne3a XL